आफ्नै भदालाई भेटाएर पालेको भन्दै सहयोग उठाएकी कमला भागेर गाउँ पुगिन् । उनकै घरमा पुगे, पत्रकार । कमलाको पर्दाफास (भिडियो हेर्नुस) - Nalapani
काठमाडौं- पछिल्लो समय धादिँगका बालक अनुज भुषालका भिडियोहरु युटुबमा भाईरल भैरहेका छन् । अघिल्लो समय एक महिलाले उनलाई काठमाडौंमा पालेको खबरले सबैको आँखामा आँशु आयो । धादिँगबाट टिपरमा लुकेर आएको कथा बुन्दै बालकलाई पढाउने भन्दै सबैको सहयोगको आश गरेकी बिमलाको पछि पर्दाफास भयो ।
पछि बिमला ती बालकको फुपु रहेको खुल्यो । उनले पटक पटक कुरा फेरिन् । अनेक कथा बुनिन् तर पछि उनको सत्य लुकेन र उनी ती बालक सहित धादिँग भागिन् । यसैबिच स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेल धादिँग पुगे र त्यहाँको वास्तविकता सबै पर्दाफास गरे । भिडियो हेर्नुहोस
पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन । चिकित्सकहरु विवाहका लागि बढीमा ५ वर्षसम्मको मात्र ग्याप राम्रो हुने बताउछन् । एकै उमेरमा विवाह गर्दा भावनात्मक सम्बन्ध र सोचाइ पनि मिल्ने भएकाले धेरै लामो अन्तरमा विवाह गर्नुहुँदैन । तर नेपाली समाजमा १५ वर्षको अन्तरमा पनि विवाह भएको पाइन्छ । प्रायः जोडीको अन्तर १० वर्षको हुन्छ ।
उमेरको बढी अन्तरले यौनजीवन प्रभावित हुनसक्छ । मानौं १५ वर्षको अन्तरमा विवाह भएको छ भने पुरुषको उमेर ५५ वर्ष पुग्दा महिलाको उमेर ४० मात्र हुन्छ । महिला ४० वर्षमा यौनमा निकै सक्रिय रहन्छन् तर प्रायः पुरुषमा ५५ वर्षको उमेरमा यौनक्षमतामा ह्रास हुँदै गएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यौनकै कारण पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । उमेरको धेरै ग्यापले यौन भावना पनि अन्तर ल्याउछ । मानिसमा २० देखि ३० वर्षको उमेरसम्म यौन इच्छा सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
प्रायः मानिसको विवाह गर्ने उमेर पनि यही हो । चिकित्सकहरु पुरुषका लागि २८ देखि ३० वर्षको उमेर विवाहका लागि उपयुक्त भएको बताउछन् । महिलाका लागि २५ देखि २८ वर्षको उमेर राम्रो मानिन्छ । तर सेक्सोलोजीष्टहरु यौन चाहनालाई उमेर सीमामा बाध्नु गलत भएको बताउँछन् । उनीहरु यौनलाइ इच्छामा भर पर्ने विषय मान्छन् ।
← भाग्यमानी र सफल हुन्छन यी बार जन्मने मानिस ! यस्ता छन् बारहरु ! नयाँ काम सुरु गर्नु पहिले यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! अवश्य सफलता मिल्नेछ ! →